Waa Maxay Dhaqaalaha “economics”? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Baro Sidda Loolla Dhaqmo Dadka Dabeecada Xun |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, April 14, 2016
Maamulka Ganacsiga & SuuqgeyntaMaqal & MuuqaalXirfadaha & Teknolojiyada
Cabdijabaar Sh. Axmed — March 5, 2016
Waxaa macquul ah inaad in badan isweydiisay su’aashaan ah “Waa Maxay Dhaqaalaha?” Waxaa in badan su’aashaan isweydiiyay dhaqaalyahaano badan sidda ku xusan taariikhyada wadamada aadka u wanaagsan dhaqaalahooda maanta. Su’aashaan ayaa ah su’aal soo jireen ah waxaana la isweydiini jiray qarniyo badan ka hor. Sidaas waa ay noqon lahayn yaab in aysan jirin hal jawaab guud-aqbalay in su’aasha ah: “? Waa maxay dhaqaalaha”
Wakhtigaan la joogo haddii aad isku daydo inaad ku qorto website browser-yada oo aad raadiso macnaha dhaqaalaha waxaa macquul ah inaad hesho macnayaal fara badan oo kalla duwan. Qoraa walbo wuxuu u qeexaa macnayaal kalla duwan balse haddii aad si fiican ulla raacdo indhaha waxaad oganaysaa in dhammaantooda ay yihiin kuwa isku macno ah.
Haddii aad isbar-bar dhigto dhammaan macnayaasha laga qoray taariikhdii horre illaa waqtigaan la joogo manta waxaad ogaanaysaa in xaqiiqda ay tahay dhammaan inay yihiin kuwa isku wada macno ah.
Haddii aad ka raadiso qaamuusyada, erayga “dhaqaalaha” wuxuu u qeexayaa dhaqaalaha sida “daraasadda ee wax soo saarka, qaybinta, iyo isticmaalka Xoolaha ee bulshada iyo aadanaha”
Waxaad iskuulada iyo jaamacadaha kusoo baratay buugaag kalla duwan oo qeexaayo dhaqaalaha hadaba haddii aad qeexi karto, fadlan kusoo qor hoos qeybta commentiga su’aashaan jawaabteeda, Waa Maxay Dhaqaalaha?
Waa Maxay Dhaqaalaha?
Sida professor dhaqaalaha ah iyo khabiirka dhaqaalaha Tukesomalism.com, jawaabta aan ka bixinaayo su’aashaas, waxay u badan tahay wax ay weheliyaan khadadka soo socda:
“Dhaqaalaha waa daraasad, sidda shakhsiyaad iyo kooxo go’aamo ugu gaaraan khayraadka kooban iyagoo isticmaalaayo sidda ugu wanaagsan ee loo isticmaali karaayo ama loo baahi tiri karo baahidda iyo rabitaan dadka”
In la fahmo dhaqaalaha waa muhiim, marwalbo waxaan go’aan gaari karnaa markii aan ogaano halka uu maraayo dhaqaalaha. Haddii aad ibsanayso guri marka horre waxaa wanaagsan inaad faa’ido weyn ka heli karto mustaqbalka soo socdoa adigoo saadaalinaayo dhaqaalaha ka jira dalka.
“Dhaqaalaha wuxuu ku anfacaayo marka la gaaro go’aamada sidda dhaqaalaha dalka iyo mid nafsiyanba. Waxaan maalin walbo sameynaa go’aan ku saabsan dhaqaalaha. Anigoo isweydiinayno sideen u isticmaali karaa gaaska gaariga, wax walbo waxay ku salaysaa qiimaha ay kugu fadhiyaan.
Haddii aad leedahay ganacsi yar sidda dukaan oo kale, waxaad marka horre isweydiinaysaa maxaan ka heli karaa oo faa’ido haddii aan allaabtaas keeno dukaanka, wali adigoo diirada saaraayo kirida dukaanka, wakhtiga aad ku bixinayso shaqadaan, haddii aad heli karto shaqo oo aad ka dhalini karto dhaqaallo fiican waxaa macquul ah inaad dukaanka iskeega tagto. Marwalbo waxaad sameyni kartaa go’aan wanaagsan haddii aad dhinacyo badan ka fiiriso go’aanka aad ka gaarayso ganacsigaada”
Dhaqaalaha waa shey ku tiirsan nolosheena maalin walbo. Waxaad rabtaa inaad jaamacad aado, waxaad isweydiinaysaa haddii aad jaamacad aado maxaa faa’ido kuugu jira? Xaguu marayaa suuqa shaqada ee aan doonaayo inaan ka barto jaamacada? Haddii ay timaado codeynta madaxweyne, waxaad isweydiinaysaa siyaasigee ayaan u codeyni karaa?
Muxu kugu soo kordhini doonaa siyaasigaan haddii aad doorato? Muwaadanka dhabta ah marwalbo wuxuu u codeeyo siyaasiga ka fikira danaha guud ee dalka ee ma ahan mid dantiisa dhaqaalle oo kali meesha ka fiirsado. Waxwalbo ee dunidda waxaa lagu saleeyaa dhaqaallo.
Haddii aad guursanayso waxaad ka fakiraysaa mahaysataa dhaqaalle kugu filan ama shaqo fiican? Ma tahay aabo awooddo inuu bixiyo biilka caruurtiisa? Xageed guri ugu sameynaysaa caruurtaada? Maxaad u qabani kartaa hooyo iyo aabo? Su’aalahaas iyo su’aallo kale ayaad isweydiisaa oo ku saabsan noloshaada/nolosheeda maalin walbo.
Dhaqaalaha waa go’aamada aadanaha ee maalin walbo. Waxaad sameynaa ficili badan ee kusalaysan dhaqaalaha. Maalin walbo waxaad ku fakaraysaa inaad aado jaamacada ama waxbarasho, maxaa yeelay waxaa kuu muuqdo dhaqaalaha ka soo bixi karo mustaqbalka soo socda.
Waxaad ku fakarayaa inaad tahriibto oo aad tagto wadan kale waxaan shaki ku jirin inaad wadankaas u aadayso inaad ka hesho dhaqaallo si aad naftaada ay u hesho farxad ku filan, balse waxaa naga maqan in adduunka uusan ahayn meel lagu farxo ama lagu raaxaysto. Kuligeena waxaan u joognaa waa imtixaan aduunkaan.
Next post Riyadii Wanaagsaneed ee Saxaabigi Saciid BiniZayd IITukesomalism.com
Previous post Iskaashiga Bulsho Waa Ka Wanaagsan yahay Iskaashiga Shakhsi
Siday cirbixiyeennada Muslimiinta ah ugu tukan karaan hawada sare?
August 9, 2017 at 2:16 pm	— Reply
Dhaqaalahu waa barashada sida kheyraadka yar iyo baahiyaha bulshada aan xadideyn la isu waa fajin lahaa sida gu haboon.
November 1, 2017 at 10:58 am	— Reply
dhaqalaha wa mado wanagsan wll wana inoo muhim bulshada dhamanteed
November 4, 2017 at 11:47 am	— Reply
dhaqaaluhu ma muhiim in wax laga ogalado oo la bartoo waanaa jeclhy inan bartoo wayo nolosha dhan ayaa ku dhisan dhaqale
Mohamuud salad sh Ahmed
July 5, 2019 at 8:05 am	— Reply
Dhaqaale waa hanaanka aad u gaari lahayd go aanada ku aadan noloshaada iyo habkii aad u kala door bidi lahayd .